फेसन डिजाइनले आत्म निर्भर बनाउँछः पुरी | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
फेसन डिजाइनले आत्म निर्भर बनाउँछः पुरी
| 206 Views | Published Date : 19th December 2017 |
दाङ घोराही–१५ निवासी फेसन डिजाइनर गीताञ्जली पुरीसग छोटो मीठो अन्तरवार्ता:
> फेसन डिजाइन भनेको के हो ?
= मानव जीवनको सुरवातको सँगसँगै फेसनको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसै कारणले फेसनलाई मानव जीवनको एउटा अभिन्न भाग मान्न सकिन्छ । समय र परिस्थिति अनुरुप मानिसको चाहना अनुसार कपडाहरुको डिजाइनको प्रतिपादन गर्नु नै फेसन डिजाइन हो ।
> यसले समाजमा के फाइदा गर्दछ ?
= मीठो खानु राम्रो लाउनु हरेक मानिसको चाहना हुन्छ । यही चाहना अनुरुप उसले आफूलाई समाजमा पृथक किसिमले चिनाउन चाहन्छ । त्यसै कारणले उ आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउने कपडा लगायर समाजमा स्थापित हुन चाहन्छ । फेसन दुनियाँमा भन्ने गरिन्छ । ूँबकजष्यल चभाभिअतक तजभ उभचकयलबष्तिथ या बल ष्लमष्खष्मगबूि फेसनले हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व पहिचान गराउँछ । त्यसै कारणले समाजा हाम्रो फेसनले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
> यो विषय किन पढ्भयो ?
= नेपालमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो नयाँ पुस्तालाई राम्रो रोजगारीको व्यवस्था हुनसकेको छैन । त्यसै कारणले नेपालबाट नयाँ युृवा पुस्ता दिनप्रति दिन विदेशीने क्रम रहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको कुृरा हो । तर मेरो विचारमा के लाग्छ भने, आफनै मातृभूमिमा सजिलैसँग आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट र विश्वासले मैले यो विषय अध्ययन गरेकी हुँ ।
> अरु विषयहरु हुँदाहुँदै पनि किन तपाईलाई फेसन डिजाइन नै पढ्ने इच्छा जाग्यो ?
= हरेक मानिसको जीवन आ–आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरु हुन्छन् । त्यसै गरी मेरो पनि बाल्यकालदेखि नै लुगाहरुको डिजाइन कसरी बनाउँछन् भन्ने कुरातिर धेरै ध्यान जाने गथ्र्यो । मलाई स्केचिङ मा पनि उत्तिकै रुची लाग्ने गथ्र्यो । डिजाईनिङ बनाउँदा पनि मैले लुगा र गहनाको डिजाइनहरु धेरै बनाउने गर्दथे । अलि पछि टेलिभिजनहरु हेर्दै जाँदा झनै यसप्रति मेरो रुची बढ्दै गयो र फेसन डिजाइनिङ नै पढ्छु भन्ने इच्छा जाग्यो ।
> फेसन डिजाइनले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्छन्, यसप्रति तपाईको के धारणा छ ?
= हरेक चिजको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष हुन्छन् । त्यो सबै आफूमा निर्भर हुन्छ की कुन पक्षतिर लैजाने । आफूलाई समाजको अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर । हाम्रो समाजमा धेरै नै देखासीकीको चलन भएकोले होला अहिलेको नयाँ पीढिले आफूलाई के सुहाउँछ भन्दा पनि अरुले के लगाएको छ मलाई पनि त्यही चाहियो भन्ने खालको सोच भएकाले अलि असभ्य पहिरन भित्रिएका छन्, जनु पहिरन हाम्रो समाजमा राम्रोसँग एडजस्ट हुन सकेको छैन । त्यही देखासीकिको भावनालाई छोडेर हाम्रो समाजमा भिज्न सक्ने पहिरनलाई अंगालेर फेसन डिजाइनिङ र फेसन ट्रेन्डको बारेमा बुझ्न सके पछि यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
> यो विषय पूर्वभन्दा पश्चिमतिर पिछडिएको कारण के होला ?
= सबै आमा बुबाको चाहना हुन्छ आफ्नो बच्चा ठूलो मान्छे बनोस्, डक्टर, पाइलट वा इन्जिनियर पढोस्, तर उहाँहरुले बुझ्ने कोशिस नै गर्नु हुन्न कि आफ्नो छोराछोरीको के पढ्ने इच्छा छ । झन् त्यसमा पनि फेसन डिजाइनिङ भनेपछि त पढ्नै नहुने, छोराछोरी बिगार्ने विषयको नजरले हेर्नुहुन्छ । यदि हजुरको बच्चा डिजाइनिङ तिर इच्छा छ भने, यो विषयको बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने कोशिस गर्नुहोस् । फेसन डिजाइनिङ एउटा यस्तो विषय हो, जसले हजुरको बच्चालाई आत्मनिर्भर बनाइदिन्छ । हाम्रो अभिभावकको साँघुरो सोचले गर्दा नै यो विषय पश्चिमतिर पिछडिएको हो ।
> भर्खर फेसन डिजाइन सम्बन्धी प्रोग्राम गर्नुभयो, प्रोग्राम गर्दा के कस्ता अुनभवहरु बटुल्नु भयो ?
= यो प्रोग्राम हामीले एकदमै छोटो समयमा अर्गनाइज गरेका थियौ, त्यसैल ेसोचेको जति सुझाबहरु पाइएन, सोचेको जति दर्शकहरु पनि आउनु भएन, सायद यस्तो प्रोग्राम कहिले नभएर होला तर हाम्रो पहिलो अपेक्षा अनुसार जति दर्शकहरु आउनुभयो । उहाँहरु सबै जना खुशी हुुनुहुन्छ । सबैलाई प्रोग्राम एकदमै राम्रो लाग्यो । त्योभन्दा खुशीको कुरा त अरु के नै हुनसक्छ र मेरो लागि । त्यसैले म आफ्नो फेम्ली, टिम मेम्बर, अर्गनाइज, दर्शकहरु सबैमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेरो लागि यो एकदमै अविस्मरणीय अनुभव भएको छ ।
> काठमाण्डौमा यस्ता खालका प्रोग्रामहरु भइरहन्छन् तर अन्यत्र जिल्लाहरुमा भएको सुनिदैन, यसलाई प्रबल वा सफल बनाउका लागि के गर्नु पर्ला ?
= सबै भन्दा पहिले हामी सबैले फेसन डिजाइनिङको बारेमा धारणा स्वच्छ राख्नु पर्छ । फेसन शोलाई नराम्रो रुपले मात्र नहेरिदिनुहोस् । भर्खर हामीले जुन प्रोग्राम ग¥यो त्यहाँ गएका दर्शकहरुले त बुझ्नुभयो होला । काठमाण्डौमा यस्तो प्रोग्राम सामान्य रुपमा लिन्छ भने अरु ठाउँहरुमा अझै पनि फेसन फिल्डलाई भर्जिनिटिको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले अन्यत्र जिल्लाहरुमा पनि यसलाई प्रबल वा सफल बनाउनका लागि सबैमा बसेको फेसनप्रति सबैमा बसेको नकारात्मक छापलाई हटाएर फेसन फिल्डको सकारात्मक पक्षको बारेमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
> यो कोर्ष पढेर छोराछोरी बिग्रिन्छन् भन्ने गरिन्छ, यसको सबल पक्षलाई सुधार्न अभिभावकहरुलाई के गर्नुपर्ला ?
= फेसन डिजाइनिङ एउटा यस्तो विषय हो, जसले हरेक व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै आत्मबल बढाउने काम पनि गर्छ । यो कोर्ष पढेर कहिले पनि हजुरको बच्चालाई बेरोजगार बस्नु पर्दैन । कसैको दबाबमा बसेर काम गर्नु पर्दैन । यस्तो विषय पढेर मेरो बच्चाले के गरी खान्छ भन्ने धारणा कृपया अब हटाइदिनुहोस् । मैले अस्ती फेसन शो गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै यही हो । बल्की कुनै पनि बच्चाले आफ्नो डिजाइनिङ तिरको क्रियटिभ इच्छाहरुलाई मनभित्रै मारेर डाक्टर, इन्जिनियरिङ वा नर्सिङ पढ्नु नपरोस् । सबै अभिभावकहरुले फेसन डिजाइनिङलाई बुझेर आफ्नो बच्चालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ ।
> यो विषयलाई लिएर आगामी दिनहरुमा के कस्ता कदमहरु चाल्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
= सबैभन्दा पहिले त आफ्नो पढाई पूरा गर्नु छ । नेपालमा यसको मास्टर डिग्री छैन । त्यसैले बाहिर गएर पढाई पूरा गरेर फेरि आफ्नै ठाउँ दाङ मै आएर एउटा फेसन डिजाइनिङ खोल्न मन छ, ताकि धेरै मान्छेले आफ्नै ठाउँमा बसेर रोजगार पाओस् । भगवानको इच्छा र बुबा आमाको आशीर्वाद रह्यो भने मैले यो काम अवश्य पूरा गर्नेछु । र अन्तमा गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक परिवारलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्रर्याउँछु ।